Opekampe Mmadụ Asatọ Anwụọla N'otu Obodo na Rivas
Ihe pekarịrị mmadụ asatọ abụrụla ndị nwụrụ dịka otu ndị omekome a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo wakporo Rumuodohia, na obodo Rumuolumeni dị na okpuru ọchịchị ime obodo Obio/Akpor na Steeti Rivas.
Mkpamkpa a bụzi nke kpara ụbọchị ụka dịka ndị obodo ahụ gbara ọsọ ndụ were gbapụ n'ụlọ ha ebe ha na-azọ ndụ ha, ka ha ghara ị bụ ndị a ga-egbu dịka ndị otu nzuzo ahụ bịara ị chọ ndị iro ha. Ndị ahụ bụ ndị nwụrụ bụ ndị a ghọtara na ha bụ ndị otu nzuzo ọzọ ha na ha na-enwe nsogbu.
Ndị otu nzuzo ahụ jiri ime abalị oge ọ na-akụ elekere atọ nke ọnụ ụtụtụ were ruo elekere ise nke ụtụtụ were kpaa arụ a ebe ndị uweojii bụ ndị bịaziri oge ndị otu nzuzo ahụ lachara.
Onyeisioche na-ahụ maka Mmepe Obodo Rumuolumeni, Sunny Odum, kọwara ya bụ mwakpo awakporo obodo ahụ dịka ihe ọhụrụ a na-ahutụbeghị, ma tinyekwa na ọ bụ ihe na-ekwesịghị ịdị bụ ogbugbu ahụ e gburu mmadụ asatọ. Odum kpọkuziri ndị bi n'obodo ahụ ka ha ghara ịtụ egwu, ebe ọ na-ekwe nkwa na ndị ọrụ nchekwa ga-anwụchịkọ ndị ahụ aka ha dị na ya bụ arụ.
O gosipụtakwara obi nwute ya n'ebe ndị nwụrụ anwụ nọ ma gwazie ndị obodo ahụ ka ha gaa rụọ ọrụ ha dịka ha na-eme na mbụ, na-edozichago ihe niile otu o kwesịrị ịdị nke ga-egbochi ụdị arụ ahụ ime n'ọdịnihu.
Ndị otu nzuzo ahụ bụ ndị wakporo obodo ahụ n'ọnụ ụtụtụ ụnyaahụ ebe ha na-achọ ndị iro ha were na-aba n'ụlọ n'ụlọ ebe ha na-achọ ha. Nkea mere ha jiri gbuo mmadụ asatọ n'ime ha. Egwu bara ndị obodo ahụ arụ mere ọsọ jiri wee daa iru na azụ, nne amaghịzi nwa ya n'ọsọ ndụ ahụ ebe onye ọ bụla na-azọ isi onwe ya.